PinePhone Beta Edition inogona kuchengetwa mwedzi unouya | Linux Vakapindwa muropa
Mwedzi wapfuura, PINE64 yakashuma kunharaunda yake kuti anga atoita danho: mashandiro anoshandiswa nemidziyo yake achange ari Manjaro uye, nerombo rakanaka kune vashandisi vakaita seni vasingade Phosh, iyo graphical nharaunda, kunyorera uye desktop mune zvese ichave iyo yeKDE. Maawa mashoma apfuura, mune tsamba yemwedzi yemwedzi yaKurume, iyo kambani yakashuma zvakare izvo munguva pfupi iyo PinePhone Beta Chinyorwa, uye ichave ichiwanikwa mushanduro mbiri.
Iyo chishandiso inonzi PinePhone Beta Edition yeiyo software, nekuti iyo Hardware iri kuita zvakakwana uye haina musiyano chero chinhu zvine chekuita neCommunity Editions. Iri Beta nekuti Manjaro iri mubeta, saka PINE64 inoyambira zvakare kuti iwo mashandisiro atinoda kuti tinker, asi kwete kune avo vanotarisira yakakwana mushandisi ruzivo kana kushandisa chishandiso kuvimba nacho.
PinePhone Beta Edition ichatanga kutumira kupera kwaApril
Foni ichave inowanikwa mushanduro mbiri:
PinePhone Beta Edition, iine 2GB ye RAM uye 16GB yekuchengetera $ 150 (link).
PinePhone Beta Editioin Convergence Package, ine 3GB ye RAM, 32GB yekuchengetedza uye USB dock ye $ 200 (link).
Zvimwe zvinhu zvinotaurwa nePINE64 mune yavo tsamba yaKurume zvine chekuita nefoni yavo, uye izvo ndezvekuti vanoshanda panyama keyboard (iyo isingafanire kunge iri muchiSpanish kana tikatarisa zvakaitika paPineTab) uye muverengi weminwe. Izvi zvishongedzo zvichaziviswa mune ramangwana uye zvinoda kutengwa zvakasiyana. Kana dziri dzimwe nhau, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti iyo Pinebook Pro inogona kuchengetwa mwedzi uno, asi chenjera: kuve ARM, pane zvimwe zvinhu zvatisingazove nazvo, senge, semuenzaniso, zvatisingakwanise tamba DRM zvemukati kana tikasaita hunyengeri sekuisa Widevine Chrome OS kana Chromium yakanyatsogadzirirwa iyo (uye ini ndanga ndakuudza kare kuti iyo yekutamba mhando haina kunaka, kana muvhidhiyo kana odhiyo).
Kudzokera parunhare, dzokorora zvinotaurwa nePINE64, icho chisiri chinhu chakavimbika uye chevateereri vese, uye rangarira izvo VAT haina kuiswa mumutengo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » PinePhone Beta Edition ichave inowanikwa pre-odha mwedzi unouya, neManjaro uye Plasma Mobile
JingPad A1, piritsi rine JingOS rinovandudza kutenda kwedu mumahwendefa neLinux